कसरी तपाईंको व्यवसायको लागि पोडकास्ट सुरू गर्ने (मेरो बारेबाट सिकिने पाठहरू) Martech Zone
कसरी तपाईंको व्यवसायको लागि पोडकास्ट सुरू गर्ने (मबाट सिकेको पाठको साथ!)
बिहीबार, मार्च ० 4, २०२० बिहीबार, सेप्टेम्बर 30, 2021 Douglas Karr
जब मैले मेरो पोडकास्ट वर्षौं अघि सुरू गरेको थिएँ, मसँग तीन भिन्न लक्ष्यहरू थिएः
प्राधिकरण - मेरो उद्योगमा नेताहरू अन्तर्वार्ता द्वारा, म मेरो नाम जान्न चाहान्छु। यसले निश्चित रूपमा काम गर्यो र केहि अविश्वसनीय अवसरहरू पनि निम्त्यायो - जस्तै को-होस्ट डेलको ल्युमिनरीज पोडकास्टलाई मद्दत गर्ने जुन यसको दौडमा सबैभन्दा धेरै सुनेका पोडकास्टहरूको शीर्ष १% भयो।
संभावनाहरु - मँ यस बारे मा लाज लाग्दैन ... त्यहाँ कम्पनीहरु थिए कि म संग काम गर्न चाहन्थे किनकि मैले मेरो रणनीतिहरु र उनीहरु को बीच सांस्कृतिक फिट देखीयो। यसले काम गर्यो, मैले डेल सहित केहि अद्भुत कम्पनीहरु संग काम गरे, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Angie को सूची ... र अधिक।
आवाज - मेरो पोडकास्ट बढ्दै जाँदा, यसले मेरो उद्योगमा अन्य नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा साझा गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो जुन प्रतिभाशाली र बढ्दो थियो तर प्रसिद्ध छैन। म लजाउँदिन कि म पोडकास्टलाई अधिक समावेशी र विविध बनाउन चाहान्छु यसको दृश्यता र पहुँचमा सुधार गर्नका लागि।
त्योले भन्यो, यो सजिलो छैन! पाठ सिके:
प्रयास - अनुसन्धान, उत्पादन, प्रकाशित, र सामग्री प्रमोट गर्न को लागी प्रयास साक्षात्कार गरिरहेका भन्दा धेरै समय लिन्छ। त्यसो भए २० मिनेटको पोडकास्टले यसलाई तयार गर्न र प्रकाशन गर्न मेरो of देखि hours घण्टा लिन सक्दछ। त्यो मेरो समय तालिका बाहिरको गम्भीर समय हो र मेरो लागि गति कायम राख्न कठिन भएको छ।
गति - ब्लगिंग र सोशल मिडियाले कार्य गरे जस्तै पोडकास्टिंगले गर्दछ। जब तपाईं प्रकाशित गर्नुहुन्छ, तपाईं केहि अनुयायीहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो निम्न बढ्दछ र बढ्दछ ... त्यसैले गति तपाईको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ। मलाई याद छ जब मसँग सयौं श्रोताहरू थिए, मसँग अहिले हजारौं छन्।
योजना - म विश्वास गर्छु कि म मेरो पोडकास्टको तालिकामा पनि अधिक जानबूझी भएँ भने म अझ बढी गर्न सक्थें। मलाई सामग्री क्यालेन्डर विकास गर्न मनपर्दछ ताकि वर्षभरि मैले विशेष शीर्षकमा ध्यान केन्द्रित गरें। कल्पना गर्नुहोस् जनवरी अक्टुबर ई-वाणिज्य महिना हो त्यसैले विशेषज्ञहरूले आउने मौसमको लागि तयारी गरिरहेका थिए!
तपाईंको व्यवसाय किन पोडकास्ट सुरु गर्नु पर्छ?
मैले माथि प्रदान गरेको उदाहरण बाहिर बाहिर केहि सम्मोहक छन् पोडकास्ट अपनाउनेमा तथ्या .्क यो अन्वेषण लायक मध्यम बनाउँछ।
अमेरिकाका% 37% मानिसहरूले गत महिनामा पोडकास्ट सुने।
Of 63% व्यक्तिहरूले पोडकास्ट होस्टले उनीहरूको शोमा प्रमोट गरिएको केहि खरीद गरे।
२०२२ सम्म, पोडकास्ट सुन्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा १ 2022२ मिलियन मानिस बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
Businessfinan.co.co.uk, एक व्यापार वित्त, र ndingण अनुसन्धान र बेलायत मा जानकारी वेबसाइट प्रकाशक, तपाईंलाई आफ्नो पोडकास्ट प्राप्त गर्न आवश्यक सबै चीजहरूको माध्यमबाट हिड्नमा एक अचम्मको काम गर्दछ। इन्फोग्राफिक, पोडकास्ट सुरू गर्न सानो व्यवसाय गाईड निम्न महत्वपूर्ण चरणहरूमा हिँड्नुहोस् ... उनीहरूको पोस्टमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस् जहाँ उनीहरूले एक टन स्रोतहरू थप्छन्!
एक छान्नुहोस् विषय केवल तपाईं पठाउन सक्नुहुन्छ ... आइट्यून्स, स्पोटिफाई, साउन्डक्लाउड, र गुगल प्ले खोजी गर्न निश्चित हुनुहोस् तपाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर हेर्नका लागि।
सहि लिनुहोस् माइक्रोफोन। मेरो जाँच गर्नुहोस् घर स्टूडियो र उपकरण सिफारिसहरू यहाँ।
सिक्न कसरी सम्पादन तपाइँको पोडकास्ट जस्तै संपादन सफ्टवेयर को उपयोग गरेर धृष्टता GenericName, ग्यारेजब्यान्ड (म्याक मात्र), Adobe Audition (एडोबको रचनात्मक क्लाउड सुइटको साथ आउँदछ)। त्यहाँ अनलाइन प्लेटफर्महरू र अनुप्रयोगहरूको संख्या बढ्दैछ!
तपाईंको पोडकास्ट एकको रूपमा रेकर्ड गर्नुहोस् भिडियो ताकि तपाइँ यूट्यूबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कति जना छक्क पर्नुहुनेछ सुन्न Youtube लाई!
प्राप्त सेवा प्रदायक विशेष गरी पोडकास्टका लागि निर्मित। पोडकास्टहरू ठूला छन्, स्ट्रिमिंग फाईलहरू छन् र तपाईंको विशिष्ट वेब सर्भर ब्यान्डविथमा आवश्यक बन्द हुनेछ।
हामी कहाँ एक गहन लेख छ होस्ट, सिंडिकेट, र तपाइँको पोडकास्ट प्रचार त्यो विवरण सबै फरक-फरक होस्टहरू, सिन्डिकेशन, र प्रमोशन च्यानलहरू जुन तपाईं लिन सक्नुहुनेछ।
मेरो लागि अर्को जानुपर्ने संसाधन (एक महान पोडकास्टको साथ) हो ब्रासी प्रसारण कम्पनी। जेनले हजारौं मानिसहरूलाई आफ्नो व्यवसाय पोडकास्टि strategy रणनीति सुरू गर्न र निर्माण गर्न मद्दत गरेको छ।
ओह, र सदस्यता लिन निश्चित गर्नुहोस् Martech Zone साक्षात्कार, मेरो पोडकास्ट!
टैग: कसरी पोडकास्ट सुरू गर्नेपोडकास्ट सम्पादनपोडकास्ट सम्पादकहरूपोडकास्ट माइक्रोफोनहरूपोडकास्ट तथ्या .्कपोडकास्ट रणनीतिहरूपोडकास्ट सल्लाहहरूपोडकास्टिंग सुझावहरूपोडकास्ट सुरु गर्नुहोस्
२०२१ को लागि खुद्रा र उपभोक्ता खरिद गर्ने प्रवृत्ति
एक वेब क्यामेरा र बिभिन्न माइक्रोफोनको साथ iMovie को लागि रेकर्डि।